Mey 16, 2018 Admin
New blockchain ETF manomboka amin'ny NYSE
Vaovao-blockchain fifanakalozana varotra tahirim-bola Natomboka ny alarobia teo ny New York Stock Exchange.
The ETF (BKC) mihazona mizara ny 32 ireo orinasa miasa eo amin'ny cryptocurrencies na ny fototra blockchain teknolojia. Ny ETF dia nihazakazaka ny Rex mizara sy mavitrika mitantana Brian Kelly, CNBC ny mpandray anjara sy ny lohan'i BKCM, izay mitantana ny fananan'ny nomerika tetika ho an'ny mpanjifa.
Ny petra-bola ihany koa ny mizara ny Square mihazona sy chipmaker Advanced Micro Fitaovana.
Minisitry ny Vola Frantsay milaza fa ny mankafy ny cryptos
Minisitry ny Vola Frantsay, Bruno Le Maire, no lasa ambony indrindra ny mpiasam-panjakana Eoropeana notsorin'i fanohanana crypto raha nilaza ny toerana dia manana ny 'tapa-kevitra tanteraka, ary fanohanana. "
Le Maire vao haingana nanao hoe:, araka ny fandikan-teny henjana:
"Vaovao aho herintaona lasa izay, fa ankehitriny liana aho. Tsy nandray ahy isan-taona. Aoka isika fanabeazana ny olom-pirenena hafa mba hanao Frantsa ny voalohany sy ny toerana blockchain crypto-fananany fanavaozana tany Eoropa. "
Coinigy nandefa famandrihana varotra mifototra crypto fampiharana
Coinigy, ny rahona-monina cryptocurrency sehatra varotra, dia nanambara ny fandefasana ny Coinigy Mobile, famandrihana-monina finday cryptocurrency varotra ho an'ny iOS sy ny fampiharana Android, manome ny mpanjifa miaraka amin'ny sehatra ny varotra amin'ny alalan'ny efa ho 20 fifanakalozana amin'ny angon-drakitra fifandraisana manerana mihoatra noho ny 40 fifanakalozana.
Tsy toy ny efa ho sehatra varotra rehetra cryptocurrency, ny Coinigy Mobile varotra rindrambaiko miasa amin'ny modely famandrihana mpampiasa izay omena fahafahana hahazo ny sehatra sy ny functionalities for $21.95 isam-bolana.
Bitcoin harena ankibon'ny tany Kanana mpanamboatra fitaovana antontan-taratasy ho an'ny $ 1B IPO
Kanana Inc., izao tontolo izao faharoa lehibe indrindra bitcoin Mpanao ny harena ankibon'ny tany Hardware, nametraka ny lisitra fampiharana ho an'ny Hong Kong fifanakalozana tahiry, izany no ho lehibe indrindra manerana izao tontolo izao crypto mifandray IPO.
Kanana dia mikendry ny hanomboka varotra raha vao Jolay, ny olona iray ny fahalalana ny raharaha nanao hoe:, nangataka ny mba tsy fantatra, satria ny vaovao dia miankina. Ny orinasa, mipetraka any Hangzhou, lafo 300,000 bitcoin fitrandrahana rigs tamin'ny taon-dasa ary nanana vola miditra amin'ny 1.3 miliara yuan ($205M). Nandritra ny taon-dasa, Niakatra tampoka harato fidiram-bola mihoatra noho ny sixfold, araka ny Talata ny famenoana.
Ny lisitra Kanana no ho voalohany Hong Kong IPO avy ao amin'ny orinasa cryptocurrency.
Sehatra ara-tsosialy vola eToro ny hanomboka fifanakalozana crypto in US
eToro, ny sehatra ara-tsosialy vola, ny fandefasana ny cryptocurrency fifanakalozana sy ny finday kitapom-batsy, ary fanitarana ho any an-Etazonia.
“Mpanjifa manerana izao tontolo izao dia tokony afaka mampiasa ny fitaovana ilain'izy ireo ny handray anjara amin'ny tsena cryptocurrency, na inona na inona ny fahaizany,” Tale Jeneralin'ny Yoni Assia Hoy ny gazety.
Top cryptocurrency mpivarotra dia ho afaka ny hahazo vola miditra amin'ny alalan'ny fanaovana ny Portfolios mangarahara amin'ny eToro sy mamela mpivarotra hafa mba handika ny po.
Ny sehatra manan- 10 tapitrisa mpampiasa avy 140 firenena, avy any Shina sy Rosia ho any Soisa sy ny Fanjakana.
Na dia tsy misy fizotry nomena safidy ho an'ny rehefa cryptocurrency dia ho hita ao amin'ny U.S., eToro mikasa ny hanolotra cryptocurrency raharaham-barotra tany fahefana rehetra ao amin'ny firenena.
Azerbaijan hetra amin'ny vola miditra nahazo cryptocurrency
Azerbaijan dia nitaky vola miditra nahazo in cryptocurrency, araka ny Nijat Imanov, lefitry ny tale jeneralin'ny hetra politika sy stratejika fikarohana ho an'ny sampan-draharaha ny Hetra Fanompoana, araka ny firenena Trend News Agency.
Raha misy olona mividy sy mivarotra azy cryptocurrency amin'ny vidiny ambony, ny tombom-barotra dia voarakitra ho fidiram-bola sy ny foto-kevitra ny hetra, hoy Imanov, niantso azy io ho tombony hetra ho an'ny fikambanana ara-dalàna sy ny fidiram-bola ho an'ny olona hetra.